မကျဆီ ဘယျတော့မှ ခြိုးဖကျြနိုငျမှာ မဟုတျတဲ့ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ စံခြိနျ(၅)ခု – Premier League Special
မကျဆီနဲ့ စီရျောနယျလျဒိုတို့ဆိုတာက လကျရှိ ဘောလုံးလောကရဲ့ အကောငျးဆုံးကစားသမား(၂)ဦးဖွဈပွီး သူတို့နှဈဦးထဲက ဘယျသူပိုကောငျးလဲဆိုတာ အဖွရှောလို့ မရမယျ့ပုစ်ဆာတဈပုဒျဖွဈနပေါတယျ။ အသကျ(၃၅)နှဈနဲ့ အသကျ(၃၃)နှဈအရှယျရောကျလာပွီဖွဈပမေယျ့ ဒီကစားသမားနှဈဦးဟာ စံခြိနျတှေ တဈခုပွီးတဈခုရယူနပွေီး လကျရှိဘောလုံးလောကကို လှမျးမိုးထားနဆေဲပါပဲ။ စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ မကျဆီတို့ကလညျး နောကျလူတှေ လိုကျမီဖို့ခကျတဲ့ စံခြိနျတှေ၊ တဈဦးခငျြးမှတျတမျးကောငျးတှကေို အပွိုငျအဆိုငျ ရယူနကွေဆဲဖွဈပါတယျ။
အခုဖျောပွခငျြတာက မကျဆီ ဘယျတော့မှ ခြိုးဖကျြနိုငျမှာ မဟုတျတဲ့ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ စံခြိနျတှအေကွောငျးပဲဖွဈပါတယျ။ အဲဒါတှကေ ဘာတှလေဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျရအောငျ . . .
(၆)ရာသီဆကျ ဂိုး(၅၀)နဲ့အထကျ သှငျးယူခဲ့တဲ့ မှတျတမျး
စီရျောနယျလျဒိုဟာ တိုကျစဈမှူးစဈစဈ မဟုတျပမေယျ့ ဂိုးသှငျးကောငျးတဲ့ World Class Goalscorer တဈဦးဖွဈပွီး ယူနိုကျတကျ၊ ရီးယဲလျနဲ့ အခု ဂြူဗငျတပျဈအသငျးတှမှော မယုံနိုငျလောကျအောငျ ဂိုးတှေ တဒိုငျးဒိုငျးသှငျးယူပွခဲ့တယျ။ ရီးယဲလျကစားသမားဘ၀ (၉)နှဈတာကာလအတှငျး ရာသီတိုငျးမှာ အနညျးဆုံးဂိုး(၄၀)သှငျးယူခဲ့တာက မယုံနိုငျလောကျအောငျပါပဲ။ ၂၀၁၀-၁၁ ရာသီကနေ ၂၀၁၅-၁၆ ရာသီအထိ သူဟာ (၆)ရာသီဆကျ ဂိုး(၅၀)နဲ့အထကျ သှငျးယူခဲ့ပွီး ၂၀၁၄-၁၅ ရာသီမှာ (၆၁)ဂိုးအထိ သှငျးခဲ့ပါတယျ။ မကျဆီကတော့ ဂိုး(၅၀)နဲ့အထကျ သှငျးယူခဲ့တာ (၃)ရာသီဆကျသာရှိပွီး ၂၀၁၀-၁၁ ကနေ ၂၀၁၂-၁၃ ရာသီအထိ သှငျးခဲ့တာပါ။ အခုအခြိနျမှာ မကျဆီဟာ အသကျ(၃၃)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈတာကွောငျ့ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို မီဖို့က မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး။
Stats in Detail 2010-11: 53 goals , 2011-12: 60 goals, 2012-13: 55 goals, 2013-14: 51 goals, 2014-15: 61 goals, 2015-16: 51 goals
ခနျြပီယံလိဂျမှာ (၆)ရာသီဆကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး မှတျတမျး
ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲဆိုတာက စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ အကွိုကျဆုံးပွိုငျပှဲလို့တောငျ ပွောရမှာပါ။ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို (၅)ကွိမျအထိ ရရှိခဲ့ပွီး ၂၀၁၂-၁၃ ရာသီက စလို့ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကစားသမားအဖွဈ (၆)ရာသီဆကျ ရပျတညျခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီမှာ (၁၇)ဂိုးအထိ သှငျးခဲ့ပွီး တဈရာသီအတှငျး သှငျးဂိုးအမြားဆုံးစံခြိနျကိုလညျး ပိုငျဆိုငျခဲ့တယျ။ မကျဆီအနနေဲ့ ၂၀၀၈-၀၉ ကနေ ၂၀၁၁-၁၂ အထိ (၄)ရာသီဆကျသာ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမားအဖွဈ ရပျတညျနိုငျခဲ့တာပါ။
ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို (၃)ကွိမျဆကျတိုကျ ရယူခဲ့တဲ့ စံခြိနျ
၁၉၉၂ က စလို့ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲအဖွဈ အမညျပွောငျးလဲခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး လကျရှိခနျြပီယံဘှဲ့ကို ကာကှယျနိုငျခဲ့တာက ရီးယဲလျတဈသငျးတညျးရှိပွီး (၃)နှဈဆကျတိုကျ ဗိုလျစှဲခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုဗိုလျစှဲခဲ့တဲ့နရောမှာ အဓိကအကဆြုံးကစားသမားကတော့ စီရျောနယျလျဒိုက လှဲပွီး တခွားဘယျသူမှ မရှိပါဘူး။ ၂၀၁၅-၁၆၊ ၂၀၁၆-၁၇၊ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီတှမှော ဗိုလျစှဲခဲ့ပွီး စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ စံခြိနျကို မကျဆီ အမီလိုကျနိုငျဖို့ဆိုတာက လုံးဝမဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး။ မတူညီတဲ့လိဂျပွိုငျပှဲ (၃)ခုမှာ ခနျြပီယံဖွဈခဲ့တဲ့ မှတျတမျး ဒီစံခြိနျကလညျး မကျဆီအတှကျတော့ ဘယျလိုမှ လိုကျမီစရာ မရှိတော့ဘူးလို့ပဲ ပွောရမှာပါ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့အတူ ၂၀၀၆-၀၇၊ ၂၀၀၇-၀၈၊ ၂၀၀၈-၀၉ ၊ ရီးယဲလျအသငျးနဲ့ ၂၀၁၁-၁၂၊ ၂၀၁၆-၁၇၊ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးနဲ့ ၂၀၁၈-၁၉၊ ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီတှမှော အမှတျပေးဖလား ရယူခဲ့ပွီး မတူညီတဲ့လိဂျပွိုငျပှဲ(၃)ခုမှာ ခနျြပီယံဖွဈခဲ့တဲ့ ကစားသမားအဖွဈ စံခြိနျတငျထားတာပါ။
မတူညီတဲ့ ကလပျ(၂)သငျးနဲ့ တဈဦးခငျြးအဓိကဆုတှေ ရခဲ့တဲ့မှတျတမျး
ကစားသမားဘ၀ (၁၅)နှဈကြျောကာလအတှငျး စီရျောနယျလျဒို မရဖူးတဲ့ တဈဦးခငျြးအဓိက ဆုတှဆေိုတာက မရှိတော့ပါဘူး။ သူက ကလပျအသငျးတဈသငျးတညျးနဲ့သာမဟုတျဘဲ (၂)သငျးနဲ့ ရယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ ကစားသမားဘဝမှာ Ballon d’Or ၊ FIFA အကောငျးဆုံး ဘောလုံးသမား၊ ဥရောပလိဂျပွိုငျပှဲသှငျးဂိုးအမြားဆုံး (ESM)ဆု ၊ FIFA ပှတျရျှကပျဈ ဆုတှေ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ရီးယဲလျအသငျးမှာလညျး Ballon d’Or ဆု (၃)ကွိမျ၊ FIFA The Best ဆု (၂)ကွိမျ၊ ESM ဆု (၃)ကွိမျအထိ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီစံခြိနျမှတျတမျးကလညျး မကျဆီအတှကျတော့ စိတျကူးယဉျရုံအဆငျ့ပဲရှိပါလိမျ့မယျ။
မက်ဆီနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုတို့ဆိုတာက လက်ရှိ ဘောလုံးလောကရဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမား(၂)ဦးဖြစ်ပြီး သူတို့နှစ်ဦးထဲက ဘယ်သူပိုကောင်းလဲဆိုတာ အဖြေရှာလို့ မရမယ့်ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေပါတယ်။ အသက်(၃၅)နှစ်နဲ့ အသက်(၃၃)နှစ်အရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်ပေမယ့် ဒီကစားသမားနှစ်ဦးဟာ စံချိန်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုရယူနေပြီး လက်ရှိဘောလုံးလောကကို လွှမ်းမိုးထားနေဆဲပါပဲ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီတို့ကလည်း နောက်လူတွေ လိုက်မီဖို့ခက်တဲ့ စံချိန်တွေ၊ တစ်ဦးချင်းမှတ်တမ်းကောင်းတွေကို အပြိုင်အဆိုင် ရယူနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုဖော်ပြချင်တာက မက်ဆီ ဘယ်တော့မှ ချိုးဖျက်နိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ စံချိန်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင် . . .
(၆)ရာသီဆက် ဂိုး(၅၀)နဲ့အထက် သွင်းယူခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်း
စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ တိုက်စစ်မှူးစစ်စစ် မဟုတ်ပေမယ့် ဂိုးသွင်းကောင်းတဲ့ World Class Goalscorer တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယူနိုက်တက်၊ ရီးယဲလ်နဲ့ အခု ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းတွေမှာ မယုံနိုင်လောက်အောင် ဂိုးတွေ တဒိုင်းဒိုင်းသွင်းယူပြခဲ့တယ်။ ရီးယဲလ်ကစားသမားဘ၀ (၉)နှစ်တာကာလအတွင်း ရာသီတိုင်းမှာ အနည်းဆုံးဂိုး(၄၀)သွင်းယူခဲ့တာက မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ ၂၀၁၀-၁၁ ရာသီကနေ ၂၀၁၅-၁၆ ရာသီအထိ သူဟာ (၆)ရာသီဆက် ဂိုး(၅၀)နဲ့အထက် သွင်းယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၄-၁၅ ရာသီမှာ (၆၁)ဂိုးအထိ သွင်းခဲ့ပါတယ်။ မက်ဆီကတော့ ဂိုး(၅၀)နဲ့အထက် သွင်းယူခဲ့တာ (၃)ရာသီဆက်သာရှိပြီး ၂၀၁၀-၁၁ ကနေ ၂၀၁၂-၁၃ ရာသီအထိ သွင်းခဲ့တာပါ။ အခုအချိန်မှာ မက်ဆီဟာ အသက်(၃၃)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တာကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မီဖို့က မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ချန်ပီယံလိဂ်မှာ (၆)ရာသီဆက် သွင်းဂိုးအများဆုံး မှတ်တမ်း
ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲဆိုတာက စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ အကြိုက်ဆုံးပြိုင်ပွဲလို့တောင် ပြောရမှာပါ။ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို (၅)ကြိမ်အထိ ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၂-၁၃ ရာသီက စလို့ သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားအဖြစ် (၆)ရာသီဆက် ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီမှာ (၁၇)ဂိုးအထိ သွင်းခဲ့ပြီး တစ်ရာသီအတွင်း သွင်းဂိုးအများဆုံးစံချိန်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ မက်ဆီအနေနဲ့ ၂၀၀၈-၀၉ ကနေ ၂၀၁၁-၁၂ အထိ (၄)ရာသီဆက်သာ သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာပါ။
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို (၃)ကြိမ်ဆက်တိုက် ရယူခဲ့တဲ့ စံချိန်
၁၉၉၂ က စလို့ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲအဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း လက်ရှိချန်ပီယံဘွဲ့ကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာက ရီးယဲလ်တစ်သင်းတည်းရှိပြီး (၃)နှစ်ဆက်တိုက် ဗိုလ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့နေရာမှာ အဓိကအကျဆုံးကစားသမားကတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုက လွဲပြီး တခြားဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး။ ၂၀၁၅-၁၆၊ ၂၀၁၆-၁၇၊ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီတွေမှာ ဗိုလ်စွဲခဲ့ပြီး စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ စံချိန်ကို မက်ဆီ အမီလိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာက လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ မတူညီတဲ့လိဂ်ပြိုင်ပွဲ (၃)ခုမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်း ဒီစံချိန်ကလည်း မက်ဆီအတွက်တော့ ဘယ်လိုမှ လိုက်မီစရာ မရှိတော့ဘူးလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့အတူ ၂၀၀၆-၀၇၊ ၂၀၀၇-၀၈၊ ၂၀၀၈-၀၉ ၊ ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့ ၂၀၁၁-၁၂၊ ၂၀၁၆-၁၇၊ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့ ၂၀၁၈-၁၉၊ ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီတွေမှာ အမှတ်ပေးဖလား ရယူခဲ့ပြီး မတူညီတဲ့လိဂ်ပြိုင်ပွဲ(၃)ခုမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားအဖြစ် စံချိန်တင်ထားတာပါ။
မတူညီတဲ့ ကလပ်(၂)သင်းနဲ့ တစ်ဦးချင်းအဓိကဆုတွေ ရခဲ့တဲ့မှတ်တမ်း
ကစားသမားဘ၀ (၁၅)နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း စီရော်နယ်လ်ဒို မရဖူးတဲ့ တစ်ဦးချင်းအဓိက ဆုတွေဆိုတာက မရှိတော့ပါဘူး။ သူက ကလပ်အသင်းတစ်သင်းတည်းနဲ့သာမဟုတ်ဘဲ (၂)သင်းနဲ့ ရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ကစားသမားဘဝမှာ Ballon d’Or ၊ FIFA အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမား၊ ဥရောပလိဂ်ပြိုင်ပွဲသွင်းဂိုးအများဆုံး (ESM)ဆု ၊ FIFA ပွတ်ရ်ှကပ်စ် ဆုတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းမှာလည်း Ballon d’Or ဆု (၃)ကြိမ်၊ FIFA The Best ဆု (၂)ကြိမ်၊ ESM ဆု (၃)ကြိမ်အထိ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီစံချိန်မှတ်တမ်းကလည်း မက်ဆီအတွက်တော့ စိတ်ကူးယဉ်ရုံအဆင့်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်။
ပိုခကျြတီနို စိတျဝငျစားနတေဲ့ ပေါ့ဂျဘာအတှကျ ပွောငျးရှကွေ့ေး သတျမှတျလိုကျတဲ့ ယူနိုကျတကျ